Joseph Kabila: Kama bixi doono siyaasadda Congo doorashada kadib - BBC News Somali
Image caption Joseph Kabila waxa uu madaxweyne noqday asagoo 29 jir ah
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Dimuquraadiga ah ee Congo Joseph Kabila ayaa sheegay in uu xafiiska isaga tagi doono wixii ka dambeeya doorashada dalkaasi ka dhacaysa 23-ka December, balse laga yaabo in uu dib isusoo sharraxo mustaqbalka.
Mr Kabila, oo 47 jir ah, ayaa sheegay in uu kusii jirayo siyaasadda doorashada kadib asagoo sheegay " in ay jiraan waxyaabo badan oo in wax laga qabto u baahan"
Waxa uu madaxweyne ka noqday dalkaas khayraadka hodanka ku ah sanadkii 2001-kii kadib markii aabbihiis Laurent la dilay.
Muddo xileedkiisii madaxtinimo ayaa dhammaaday sanadkii 2016-kii, hase ahaatee xilka ayuu sii hayey ayadoo marba marka ka dambaysa dib loo dhigayey doorashada dalkaas.
Qaar badan oo kamid ah taageerayaasha mucaaradka ayaa lagu dilay dibadbaxyo ay ku dalbanayeen in uu xilka iska casilo oo doorashooyin la qabto.
400,000 oo caruur ah oo ku gaajoonaya Dalka DR Congo
Guddiga doorashooyinka ayaa ugu dambayntii go'aamiyey in doorashada la qabto 23-ka bishan December, ayagoo sheegay in aanay suurtogal ahayn in xilligaas kahor doorashooyinka la qabto sababo la xiriira caqabadaha ka taagan dhanka diiwaan galinta codbixiyeyaasha iyo dalkoo aan lahayn waddooyin hagaagsan iyo rabshado ka jira inta badan gobollada Bariga dalkaas kuyaal ee aanu sharcigu kajirin.
DR Congo marna ma aanay noqon nabad, iyo in xilka si dimuquraadi ah laysugu wareejiyo tan iyo markii dalkaasi uu madaxbanaanida ka qaatay dalka Belgium.
" Waxaan doonaynaa oo naga go'an in aanu samayno si kasta oo doorashooyinku u noqon karaan kuwo hufan" Mr Kabila ayaa sidaas u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters.
Mr Kabila ayaa ka taageeraya wasiirkiisii hore ee arrimaha dibadda, Emmanuel Ramazani Shadary, sidii uu ugu guulaysan lahaa doorashada.
Midowga Yurub ayaa sanadkii hore xayiraad dhanka safarka iyo hantida ah kusoo rogay Mr Shadary, kadb markii lagu eedeeyey waxyeello kadhan ah xuquuqda aadanaha, oo ay kamid tahay cadaadinta mucaaradka.
Tartanka ugu adag ee doorashada ayaa lagu wadaa in uu dhex maro asaga, hoggaamiyha mucaaradka Felix Tshisekedi iyo ganacsade lagu magacaabo Martin Fayulu Madidi.